पत्रपत्रिका – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । चालू आवमा पनि बैंकहरूमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव हुने संकेत देखिएको छ । पछिल्ला ३–४ वर्षयता देखिँदै आएको आएको तरलता अभावको चक्र यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको हो । चालू आवको पहिलो महिनामै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालनमा असन्तुलन देखिएको छ । साउन महिनामा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ९ अर्बले बढ्दा निक्षेप संकलन २३ अर्ब
खस्कियो विदेशी मुद्राको ढुकुटी
बैंकिङ खबर । पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले भने जस्तै सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा गए नेपालाई विदेशी मुद्राको ढुकुटी व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन पर्ने विश्लेषकले बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न र विकास निर्माणमा आवश्यक वस्तुको आयात गर्ने सामथ्र्यसमेत मुलुकले गुमाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न थालेयता विदेशी विनिमय सञ्चितिको लक्ष्य पहिलोपटक
काठमाडौं : मौद्रिक नीतिका प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्थाबाट ठूला बैंकबीच मर्जर गराउने प्रयास अन्योलमा परेपछि राष्ट्र बैंकले क्रसहोल्डिङ भएका संस्था आपसमा गाभ्न पूर्वतयारी थालेको छ। एकै व्यक्ति वा समूहले लगानी गरेर सञ्चालन गरेका संस्था गाभ्न केन्द्रीय बैंकले लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएको छ। खासगरी नेपाल बंगलादेश र एनसीसी बैंकलाई गाभ्ने राष्ट्र बैंकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका
निजीक्षेत्रका १८ जीवन बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा बीमाशुल्क बापत ७० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । उक्त कारोबारबाट उनीहरूले ३ अर्ब ६ करोड ३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । कम्पनीको बीमांकीय मूल्यांकनपछि खुद नाफा अरू बढ्नेछ । अघिल्लो आव (२०७४/७५) मा उनीहरूले रू. ४७ अर्ब ८५ करोड
गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा : नाफा कमाउनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पहिलो
काठमाडौं । नाफा कमाउने मामलामा दुई सरकारी बैंक गत आर्थिक वर्षमा निजीक्षेत्रका बैंकभन्दा अब्बल रहे । नाफाका हिसाबले सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् भने निजीक्षेत्रको नबिल बैंक तेस्रोमा छ । २८ वाणिज्य बैंकमध्ये हालसम्म २६ ले गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । तीमध्ये नेपाल
काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेडदर) गणना विधि परिवर्तन गरेपछि पुनरवलोकन गर्न बैंकर्सले लबिङ थालेका छन्। उनीहरूले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई भेटेर अहिले तोकिएको स्प्रेडदरले बैंकलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्नेभन्दै पुनरवलोकनका लागि आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्जाको भारित औसत ब्याजदर र निक्षेपको औसत भारित ब्याजदरअन्तर ४.४ प्रतिशत
सुनको भाउमा अचाक्ली वृद्धि भएछि नेपाली बजारमा सुन कारोबार ठप्पजस्तै भएको छ । बजारमा सुनको माग नभएपछि आयात गरेको ६ सय ४२ किलो सुन बैंकमै थुप्रिएको छ । ‘बैंकले लिन आऊ भन्छ । तर, बजारमा माग छैन,’ नेपाल सुनचाँदी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । शुक्रबार र शनिबार सुन प्रतितोला ७१ हजार पाँच सयमा खरिद–बिक्री भयो । दुई सातायता मात्र
बैंकको सम्भावित लाभांश क्षमता औसतमा १८.९२%, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सबैभन्दा बढी
गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मुनाफाबाट २८ वाणिज्य बैंकले औसतमा १८ दशमलव ९२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने देखिएको छ । ती कम्पनीको गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणको आधारमा यस्तो सम्भावना देखिएको हो । २८ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी सम्भावित लाभांश क्षमता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । गत आवमा रू. ३ अर्ब ६१ करोड ७३
सहकारीको संख्या पाँच हजारमा झारिने
काठमाडौं : सहकारीको संख्या पाँच हजारमा झारिने भएको छ । देशभरका ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारीलाई मर्ज गरी पाँच हजारमा झारिने सहकारीका अगुवाले बताएका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले धेरै संख्यामा सहकारी संस्थालाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न असहज हुँदा सुशासनमा समस्या देखिएको भन्दै मर्ज गरी पाँच हजारमा झार्नुपर्ने बताएका हुन् । अहिले
ubसहुलियतपूर्ण कर्जालाई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा लिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारले बैंकलाई हस्तक्षेप गर्न नपरोस् भन्दै उनले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘बैंकहरूका पनि केही सामाजिक दायित्व हुन्छन्, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सामाजिक दायित्वका रूपमा लिन बैंकका साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु,’ युवा परिषद्ले आयोजना गरेको युवा उद्यमी सम्मेलन कार्यक्रम खतिवडाले भने, ‘नैतिक दबाबले नपुगे अरू पनि
नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकासुरेन्समा गरिएको कडाइ फुकुवा गर्न नेपाल बैंकर्स संघले माग गरेपछि त्यसको विपक्षमा जीवन बीमा अभिकर्ताहरू उभिएका छन् । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले बैंकासुरेन्स फुकुवा नगर्न भन्दै बैंकर्स संघविरुद्ध राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई बुधवार १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बैंकहरूलाई बीमा पोलिसी विक्रीमा रोक लगाउनु उचित नभएको ठहर गर्दै बैंकर्स संघले
काठमाडौँ — नौ महिनाको अवधिमा १६ हजार ६ सय ८२ जनाले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । जसअन्तर्गत स्वीकृत कर्जा ३४ अर्ब ४१ करोड १० लाख ४९ हजार र बाँकी कर्जामा २९ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख १९ हजार रहेको छ । सात शीर्षकमा कर्जा वितरण हुँदै आएको छ । सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत
बैंकहरूमा थन्कियो ७३० केजी सुन : व्यवसायीले किन्छन्, ग्राहकले बेच्छन्
काठमाडौं । सुनको मूल्य लगातार आकाशिँदै गएपछि कारोबारमा मन्दी आएको छ । तीज नजिकिँदा पनि काठमाडौं लगायत प्रमुख शहरका सुनचाँदी पसलहरूमा सुनको कारोबार सुस्त देखिएको छ । त्यसमाथि, पसलमा गरगहना किन्नेभन्दा विक्री गर्ने ग्राहक बढी आउन थालेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुुसार देशभरका २२ हजार सुनचाँदी पसलमा यो मौसममा दैनिक ४० केजीसम्म सुन
राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकिङ प्रणालीमा हलचल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमबार ल्याएको निर्देशनले यति बेला बैंकिङ प्रणालीमा हलचल मच्चिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बैंकहरूको नाफा २५ प्रतिशत घट्नेलगायतका अर्थतन्त्रमै समस्या पर्ने भन्दै बैंकर्सले विरोध गरेपछि हलचल मच्चिएको हो । बैंकर्सले स्प्रेडदरलगायतका निर्देशनमा पुर्नविचार गर्न बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकसँग भेटघाट गरिसकेको छ । भेटवार्ताको क्रममा
सहुलियतपूर्ण कर्जा : कार्यविधि संशोधन गर्न माग
काठमाडौं : ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ संशोधन गर्न माग गरिएको छ। सरोकारवाला निकायले कार्यविधि युवामैत्री नभएको भन्दै संशोधनको माग गरेका हुन्। राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल र रिटर्नी माइग्रेट नेपालले बिहीबार राजधानीमा संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यन्वयनका जटिलता र संशोधनको आवश्यकता’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले कार्यविधि संशोधन गरिने बताए। कार्यविधि संशोधन